जाभास्क्रिप्ट - विकिपिडिया
जाभास्क्रिप्ट (/ˈdʒɑːvəˌskrɪpt/; JS) एउटा कम्प्यूटर प्रोग्रामिङ भाषा हो । यो एउटा स्क्रिप्टिङ भाषा हो जुन मुख्य रूपमा क्लाईन्ट साइटहरूमा वेवपेज निर्माणमा प्रयोग हुन्छ।
अनाधिकारिक जाभास्क्रिप्ट लोगो
Multi-paradigm: स्क्रिप्टिंग, object-oriented (prototype-based), imperative, functional
नेटसकेप सूचना सङ्गठन, मोजिला फाउन्डेसन
1.8.5 / सन् २०११ मार्च २२
Scheme, Self, Java, C, Python, AWK, HyperTalk
ActionScript, AtScript, CoffeeScript, Dart, JScript .NET, Objective-J, QML, TypeScript, Node.js, LiveScript
इन्टरनेट मिडीया प्रकार
१ प्रमुख विशेषताहरू
२ जाभास्क्रिप्ट का विभिन्न उपयोग
३ वेवपेज निर्माणमा जाभास्क्रिप्ट
वेवपेजहरूलाई डायनामिक (dynamic) बनाउनमा उपयोगी ।
क्लाईन्ट साइडमा (प्रयोगकर्ता को कम्प्यूटरमा) र सर्भर साइड दुवै तिर चल्न सक्छ ।
यो एउटा इन्टरप्रिटेड भाषा हो।
ब्जेक्ट ओरिएन्टेड भाषा हो।
यो जुनै पनि अपरेटिङ सिस्टममा चल्न सक्छ ।
यसमा पहिलो श्रेणीको फंशन हुन्छ।
जाभास्क्रिप्ट को सेन्टेक्स, सी (C) का सेन्टेक्सहरूबाट प्रभावित हुन्छन्।
जाभास्क्रिप्टको वास्तविक नाम "ECMAScript" हो ।
यो प‍‍ृष्ठभूमिमा अगाडि भइरहेका कामहरू लाई असर नगरिकन चल्न सक्छ।
यसको नाममा जाभा शब्द आएको छ, यसको जाभा नामक प्रोग्रामिङ भाषासँग कुनै सम्बन्ध छैन । तर जाभा तथा जाभास्क्रिप्ट दुबै का सेन्टेक्स सी (C) का सेन्टेक्सहरूसँग प्रभावित छन् । जाभास्क्रिप्टको डिजाइनका मुख्य सिद्धान्त सेल्फ (Self) नामक प्रोग्रामिङ भाषाबाट लिर्इएका छन् ।
जाभास्क्रिप्ट का विभिन्न उपयोगसम्पादन
जाभास्क्रिप्ट, एच.टी.एम.एल. डिजाइनरहरू का लागि प्रोग्रामिङको सुविधा प्रदान गर्दछ ।
जाभास्क्रिप्ट, एच.टी.एम.एल. पेजहरूमा गतिशील टेक्स्ट (Dynamic Text) राख्ने सुविधा दिन्छ ।
जाभास्क्रिप्टले घटनाहरू (Events) अनुसार वांछित प्रतिक्रिया गर्नको लागि उपयोग गरिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै एच.टी.एम.एल. पेजको कुनै बटनमा क्लिक गर्दा कुनै पूर्व-निर्धारित कार्य गर्नको लागि ।
जाभास्क्रिप्टले elements पढ्न वा लेख्न सक्दछ, यसको अर्थ यो हुन्छ की एच.टी.एम.एल. पेजको कुनै अवयवको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न उसलाई बदल्न वा हटाउन सकिन्छ ।
जाभास्क्रिप्टले आंकडाहरूको जाँच गर्न सक्दछ । कुनै Form को प्रयोगकर्ता द्वारा त्यस Form मा भरीएका आंकडाहरूलाई पहिले जाँच गरीसके पछि सर्भर मा पठाउने सुविधा दिन्छ । यसबाट सर्भरको समय पनि बच्ने र प्रयोगकर्तालाई गल्तीको जानकारी छिट्टै हुन्छ ।
जाभास्क्रिप्टले कुनै पेजमा आएको आगन्तुकको ब्राउजर को बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछ । यसको उपयोग गरेर त्यस ब्राउजरलाई अनुकूल, समुचित व्यवहार गर्न सक्दछ ताकि त्यो पेज सबै ब्राउजरहरूमा ठीकसँग देखाउन सकियोस् ।
जाभास्क्रिप्टको प्रयोग कुक्की (cookies) को निर्माण मा गर्न सकिन्छ ।
वेवपेज निर्माणमा जाभास्क्रिप्टसम्पादन
जाभास्क्रिप्टको मुख्य प्रयोग त्यस्तो फंशन लेख्नका लागि हुन्छ जुन एच.टी.एम.एल. पेजहरूमा अन्तर्निहित (embedded) हुन्छन्। तल एउटा उदाहरण दिइएको छ जसले एच.टी.एम.एल. मा जाभास्क्रिप्ट कसरी समाहित (include) भएको छ भन्ने दर्शाउँदछ ।
''तपाईको ब्राउजरले जाभास्क्रिप्ट Support गरेन ।''
↑ "RFC 4329", Apps.ietf.org, अन्तिम पहुँच २०१३-०५-२६।
↑ "System-Declared Uniform Type Identifiers", म्याक ओएस एक्स सन्दर्भ पुस्तकालय, एप्पल कम्पनी, अन्तिम पहुँच २०१०-०३-०५।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=जाभास्क्रिप्ट&oldid=1065277" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन ९ मे २०२२, १९:३२
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १९:३२, ९ मे २०२२ मा परिवर्तन गरिएको थियो।